မျက်ခွံရောင်ခြင်းအကြောင်း - Hello Sayarwon
မျက်ခွံရောင်ခြင်းဆိုတာ တွေ့ရများတဲ့ မျက်စိပြဿနြာဖစ်ပြီး မျက်ခွံအနားများဟာ အဆီများ၊ ဘက်တီးရီးယားများကြောင့် နီရဲရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယားယံခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ နီရဲခြင်း၊ ပူလောင်ခြင်း၊ စူးနေခြင်း စတာတွေကြုံတွေ့ရလို့ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ခြင်း၊ အရေပြားရဲ့ အခြေအနေ၊ မျက်လုံးခြောက်သွေ့ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာများဟာ မျက်ခွံရောင်ခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်ခွံရောင်ခြင်း အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ အောက်ပါ အချက်တွေဟာ အဓိကအမျိုးအစားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
– အရှေ့ပိုင်းရောင်ခြင်း။ မျက်ခွံရဲ့ အပြင်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပွားပြီး မျက်တောင်များပါ ပါဝင်ပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယား၊ ဒါမှမဟုတ် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သေချာစွာ မကုသရင် ဖြစ်တဲ့နေရာဟာ ထူလာပြီး အပြင်ဘက် ဒါမှမဟုတ် အတွင်းပိုင်းကို ဖောင်းထွက်လာပြီး မျက်ကြည်လွှာကို ထိခိုက်နိုင်တာမို့ ပိုမိုဆိုးရွားတဲ့ အမြင်အာရုံပြသနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
– မျက်ခွံအနောက်ပိုင်းရောင်ခြင်း။ မီဘိုးမီးယမ်း ဂလင်း အလုပ်ကောင်းစွာ မလုပ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မျက်ခွံရဲ့ အနားများဟာ ထူထဲမာကြောလာပါတယ်။ တခါတရံမှာ မျက်ရည်များဟာ အမြှုပ်များနဲ့ တူလာပါတယ်။ မျက်စိစွန်ခြင်းလည်း ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
– ရောနှောပေါင်းစပ်သော မျက်ခွံရောင်ခြင်း။ အရှေ့နဲ့ အနောက်ပိုင်း ၂မျိုးစလုံးဖြစ်ပွားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်ခွံရောင်ခြင်း အမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီး အကြောင်းအရင်း ကွဲပြားပါတယ်။ ဥပမာ အရှေ့ပိုင်း မျက်ခွံရောင်ခြင်းဟာ Staphylococus ဘက်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။ အဲဒီဘက်တီးရီးယားများဟာ လူ့အရေပြားပေါ်မှာ ရှိနေတတ်ကြပြီး အန္တရာယ်မပေးတတ်ပေမယ့် တခါတရံမှာ မျက်ခွံရောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ အဆီဂလင်းများကြောင့် အရေပြားရောင်ရမ်းခြင်း အခြေအနေကလည်း အရှေ့ပိုင်းမျက်ခွံရောင်ခြင်းကို ဖြစ်ပွားစေပြီး မီဘိုးမီးယန်းဂလင်းများကို ပိတ်ဆို့စေပါတယ်။ အနောက်ပိုင်း မျက်ခွံရောင်ခြင်းဟာ မီဘိုးမီးယန်းဂလင်းများ ပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပွားပါတယ်။ အညစ်အကြေး၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ဝက်ခြံ စတာတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မျက်ခွံရောင်ရင် အောက်ပါအခြေအနေတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
– မျက်စိနှစ်ဖက်စလုံး မျက်ခွံများ ရောင်ရမ်းခြင်း
– ယားယံခြင်း၊ ညစ်ပေခြင်း၊ မျက်စိနာခြင်း၊ တခါတရံ မျက်လုံးများ ပူခြင်း
– မျက်တောင်များ ထူထဲပြီး မာလာခြင်း၊ မျက်ခွံများ အဆီထွက်ကာ မို့နေခြင်း
– မျက်ဝတ်များထွက်ပြီး မနက်ပိုင်းတွင် မျက်ဝတ်များကပ်နေ၍ မျက်လုံးဖွင့်မရခြင်း
– မျက်တောင်များ ပုံစံမမှန်ခြင်း၊ ပိုဆိုးလာလျှင် မျက်တောင်များကျွတ်လာခြင်း
Blepharitis – NHS Choices. Accessed in February 26, 2017. nhs.uk/conditions/Blepharitis/Pages/Introduction.aspx.
Blepharitis. Treatment and causes. Eyelid inflammation. Accessed in February 26, 2017. www.Patient.info/health/blepharitis-leaflet.